Britain oo joojineysa duulimaadyada dalal ay Koonfur Afrika ka... | Universal Somali TV
Dowladda Britain ayaa sheegtay inay joojineyso duulimaadyada uga yimaada qaar ka mid ah dalalka Afrika, oo ay Koonfur Afrika ugu horeyso, ka dib markii lagu arkay nooc cusub oo COVID-19 ah.
Xoghayaha Caafimaadka Britain, Sajid Javid ayaa ku dhawaaqay laga bilaabo saqda dhexe ee caawa in lix dal oo Qaaradda Afrika ku yaala lagu dari doono liiska cas, iyadoona si ku-meel-gaar ah loo xanibay duulimaadyadii Britain uga imaanayay dalalkaasi.
Xoghayaha Caafimaadka Britain ayaa sheegay dhammaan duulimaadyadii ka imaanayay Koonfur Afrika, Botswana, Lesotho, Eswatini, Namibia iyo Zimbabwe in la hakiyay.
Waxaa uu sheegay in khubarada caafimaadka ay aad uga walaacsan yihiin farac cusub oo COVID-19 ah oo lagu arkay dalalka gobolka, waana xilli dilaacan cusub ee COVID-19 la sheegay in uu aad u faafo, iyadoona la sheegayo tallaalka hadda jira ee COVID-19 aanu wax badan ka tari karin noocan cusub ee fayriska Corona.
Waxa kaloo uu sheegay in fayriskan cusub uu wax badan ka duwanaan karo kii hore ee Delta.
Inkastoo aan weli wax kiisas ah laga xaqiijin gudaha Boqortooyada Midowday ee UK, haddana Sajid Javid ayaa sheegay in loo baahan yahay in taxadar dheeri ah la muujiyo, lana qaado tallaabada ugu macquulsan ee xuduudaha dalkaasi lagu ilaalin karo.
Javid ayaa xusay laga bilaabo saqda dhexe ee caawa in dadka aan reer UK ahayn laga mamnuuci doono inay soo galaan dalka, haddii ay jooggeen dalalkaasi tobankii maalmood ee ugu dambeysay.
Xanuunsidaha COVID-19 ee Coronavirus uu keeno ayaa bilowgii sanadkii hore dalalka dunida ku khasbay inay qaadaan tallaabooyin ay duulimaadyada iyo dhaqdhaqaaqa xuduudahooda ay ku xakameynayan, bal si uun looga hortaggo faafitaanka fayriskaasi.
Kan-xigaFaraca cusub ee Coronavirus oo loogu ...
Kan-horeAbiy Ahmed oo sheegay in dagaalka uu ...
Abiy Ahmed oo sheegay in dagaalka uu hoggaamin doono
62,797,371 unique visits